Instagram Checkout hadda waxaa adeegsada dhammaan meheradaha u qalma ee Mareykanka wuxuuna mustaqbalka dhow noqon doonaa mid caalami ah.
Muuqaalka Bixinta ayaa noo oggolaanaya inaan alaabada si toos ah uga iibsanno barnaamijkeena Insta. Hadda ka dib, waxaan si toos ah ugu dhejin karnaa amarradayada Insta markaan ku sahamino qoraallada la iibsan karo oo leh sumadaha alaabta aan ugu jecel nahay.
Sida laga soo xigtay Instagram, 130 milyan oo isticmaaleyaal ah ayaa gujinaya boosteejooyinka laga dukaameysan karo bil kasta, mana aha wax la yaab leh in Instagram ay hadda dhigtay shaqadii ” Baadhid ” diyaar u ah dhammaan meheradaha ku yaal Maraykanka.
Kordhinta caanka ah ee “dhejimaha dukaanka” si dhakhso leh ugu beddelay Insta goob-ganacsi e-commerce. Tilmaanta Bixinta ayaa hadda dhammaystiri doonta isbeddelkan waxayna horumarin doontaa khibradda isticmaalaha si ka sii wanaagsan.
Waxaan hadda ku dhejin karnaa sumadda badeecadda aan jecel nahay oo aan toos ugu bixin karno barta Instagram ee badeecaddaas. Habka iibsigayagu weligiis ugama sahlana madal kasta oo kale oo warbaahinta bulshada ah.
Waxay gebi ahaanba beddeleen sidaan wax u iibsanno waxayna beddeleen habka ay shirkaduhu u isticmaalaan dukaankooda Insta..
Milkiilayaasha meheradaha, Awoodda si dhakhso leh loogu beddelo dhagaystayaashooda iyagoo si fudud u daalacanaya iibsashada alaabada iyadoon laga tagin barnaamijka Instagram waxay keenaysaa kororka iibka.
Ganacsiyada, ah saamayn iyo adeegsadayaashu waxay la kulmi doonaan waqtiyo xiiso leh shaqeynta lacag bixinta.
Haddii aad isticmaasho Instagram Checkout?
In badan oo naga mid ah ayaa dhowr sano hadda u adeegsanaynay madasha Insta suuqgeynta iyo xayaysiinta., waxaana ka warqabnaa ahmiyadda ay u lahayd xeeladaha suuqgeynta.
Laakiin isbeddeladii dhawaa ee sanadkii la soo dhaafay ayaa gebi ahaanba dib u qaabeynaya madalkan si wanaagsan.. Waa inaysan mar dambe noqon madal xayaysiis.
Muuqaalka Bixinta Instagram wuxuu macaamiisheena siiyaa madal sahlan, kuwaas oo ay ka iibsan karaan alaabtayada.
Sanadkan, Instagram waxay isku dayday inay dejiso meheradaha iyo sumcadaha inta ay kari karto masiibada.
Waxay guud ahaan ka shaqeeyeen bakhaarka adduunka oo dhan waxayna soo saareen koodhka QR si ay nooga caawiyaan inaan ganacsigeenna ku korinno Insta.
Instagram ayaa warisay in 80% xisaabaadka ay raacaan akoon ganacsi, taas oo si cad u sharxaysa sababta ay si adag ugu shaqeeyeen si loo hubiyo in aan ka faa'iidaysan karno madalkeenna.
Halkan waxaa ah sida adeegsadayaashu ugu iibsan karaan alaabtayada dhowr tallaabo oo fudud:
• Guji astaanta wax iibsiga
• Guji sheyga la soo bandhigay
• Taabo diiwaanka lacagta
• Geli faahfaahinta kaarka iyo macluumaadka biilka
• Guji dalabka goobta
Sida Loo Codsado Jeegga Instagram -ka?
Waxaad ku isticmaali kartaa Checkout Instagram hadda gudaha Mareykanka, laakiin waa inaad marka hore dejisaa bakhaarkaaga.
Sidaa darteed koontadaadu waxay ku xidhan tahay boggaaga Facebook ama Shopify, halkaas oo Insta ka soo ceshan karto buuggaaga iyo macluumaadka alaabta.
Insta waxay u isticmaashaa macluumaadkaaga si ay u abuurto summadaha badeecadaada si aad ugu sumadeyso alaabtaada sawirradaada, fiidiyaha iyo IGTV hadda.
Kadib si guul leh u dejinta bakhaarkaaga, waad isticmaali kartaa foomkan halkan si aad u codsato Jeegitaan.
Haddii aadan joogin Mareykanka, is diyaari oo abuur bakhaarkaaga. Bilow bilow ah si aad u isticmaasho shaqeynta lacag bixinta isla marka la geeyo caalamka.
Sida ugu badan ee aad uga hesho diiwaanka lacagtaada
Waxaan kuu haynaa xoogaa talooyin ah si aad uga faa'iideysato muuqaalkaaga Instagram Checkout., iyo sidan, waxaad xaqiijin kartaa inaad kordhiso iibintaada sidoo kale.
Instagram News Automation. Tixgeli inaad ku calaamadiso alaabtaada dhammaan qaababka maadada
Ha xaddidin summadahaaga haddii aad rabto inaad sare u qaaddo iibintaada. Had iyo jeer xasuuso inaad ku calaamadiso alaabtaada qaab kasta oo ka kooban. Ka faa'iidayso sawirada iyo fiidyowyada.
Iyada oo lagu kobcinayo summadaha qaabab kala duwan, waxaad hubisaa inaad gaarto dad badan intii suurtogal ah kuwaas oo eegaya waxa ku jira.
In badan oo alaabtaadu muuqato, way u sahlan tahay dhagaystayaashaadu inay ogaadaan oo ay kaa iibsadaan adiga oo adeegsanaya habka lacag bixinta.
Instagram News Automation. Iskaashi lala yeesho dadka saamaynta leh
Saameeyayaashu aad bay u weyn yihiin, waxayna aad ula dhacsan yihiin dadka raacsan. Waa inaan siino sumcad maxaa yeelay waxay ku fiican yihiin waxay sameeyaan.
Qaar badan oo iyaga ka mid ahi waxay ku guuleysteen inay si joogto ah u horumariyaan goobahooda shaqsiyeed iyagoo ku hawlan oo u soo saara waxyaabaha asalka u ah taageerayaashooda daacadda ah.. Sidan ayay noloshooda u maareeyaan, markaa waa inay ogaadaan shay ama laba.
Iyada oo lala kaashanayo saamileyaasha iyo kuwa haysta koontada abuuraha kuwaas oo si toos ah ugu sumadeyn kara badeecadaha ku jira, waxaad ku xayeysiin kartaa badeecadahaaga si aad u daran madalkooda, laakiin si dhab ah.
Kaliya maahan in badeecadaadu ay si dhakhso leh u ogaan doonaan kuwa raacsan, laakiin sidoo kale waa hab caqli badan oo naftaada lagu xayeysiiyo, adigoon isku dayin inaad si toos ah u iibiso alaabtaada.
Instagram News Automation. Isticmaal carousels
U adeegsiga carousels alaabtaada ayaa si dhakhso leh u gaari kara dhagaystayaashaada, laakiin waxtar leh. In badan oo muuqaal ahaan raalli ka ah sawirrada alaabtaada, way sahlanaan doontaa in la soo jiito dareenka dhagaystayaashaada.
Noqo hal -abuur oo samee sawirro qaar ka mid ah alaabtaada. In sidan, kaliya kuma sumayn kartid dhowr badeeco hal shay, laakiin sidoo kale in la tilmaamo alaabtan si wada jir ah oo dhakhso badan.
Dib -u -eegis
Hawlaha dukaanka iyo lacag -bixinta ayaa si dhakhso leh ugu beddelaya Insta barxad ka weyn sidii hore. Hubi inaad la socoto oo aad barato dhammaan sifooyinka jira iyo kuwa cusub ee la sii daayo..
Kooxda Instagram ayaa aad u shaqaysay dhowrkii sano ee la soo dhaafay si loo daboolo baahiyahaaga iyo filashooyinkaaga, markaa hubso inaad si buuxda uga faa'iidaysato dhammaan faa'iidooyinka ay leedahay inay bixiso.
Maqaal horeShopping -ka IGTV ayaa hadda laga heli karaa barta Instagram
Maqaalka XigaSi toos ah Instagram: Bot Loogu Jecel Yahay Automatic